REPUBLICADAINIK | मेगा क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेडद्वारा कारोबार शुरू - REPUBLICADAINIK
मेगा क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेडद्वारा कारोबार शुरू
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको मेगा क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेडको औपचारिक शुभारम्भ भएको छ ।
राजधानीमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले संयुक्त रुपमा समूद्घाटन गरे ।
मेगा क्यापिटल मार्केट्सलाई शुभकामना दिँदै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. कार्कीले नेपालमा मर्चेन्ट बैंकिङको विकासक्रम बढ्नु खुसीको कुरा रहेको बताए ।
मर्चेन्ट बैंकिङको बजार काठमाडौं बाहिर पनि विस्तार भएकाले ग्राहकहरुले कम लागतमै सहज र सरल ढंगले सेवा पाउन थालेको बताए । उनले मेगा क्यापिटललाई नयाँ मोडलमा काम गर्न शुभकामना पनि दिए ।
यसैगरी, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका अध्यक्ष शाहले मेगा क्यापिटलले छोटो समयमै प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मेगा बैंकको शतप्रतिशत लगानीमा खुलेको क्यापिटलले पुँजीबजारमा नयाँ किसिमले काम गर्ने उनले बताए ।
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी सिइओ अनुपमा खुञ्जेलीले मेगालाई सबै नेपालीको बैंक बनाउने योजना अनुसार सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न मेगा बैंक कटिबद्ध रहेको बताइन् । उनले मेगा बैंकका देशभर छरिएका १०२ शाखाबाट मेगा क्यापिटलका पनि सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउने बताइन् ।
मेगा क्यापिटलका अध्यक्ष ईश्वरबहादुर गुरुङले ग्राहकवर्गहरुको सुविधा र लगानी उद्देश्य तथा आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी नविनतम र उपयुक्त सेवाहरू पुँजीबजारमा ल्याउनु नै कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।
मेगा क्यापिटल मार्केटस् लिमिटेडले चैत्र १८ गते मर्चेन्ट बैकिङ्ग व्यवसाय गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । मेगा क्यापिटलको अधिकृत पूँजी ३० करोड छ भने चुक्ता पूँजी २० करोड रुपियाँ रहेको छ ।
Published : Saturday, 2019 April 20, 4:53 pm